Dhaqaalaha Japan oo u baahan dhalista carruur badan | Radio Himilo
Home / Caruurta / Dhaqaalaha Japan oo u baahan dhalista carruur badan
Dhaqaalaha Japan oo u baahan dhalista carruur badan
Posted by: radio himilo February 4, 2017
Muqdisho – Jabaan ayaa qorsheyneysa tallaabo ay kor ugu qaadeyso tirada heerka dhalasho–iyada taas ku xoojinaysa inay bilowdo daryeel bilaash ah oo ilmo-dhalista ah iyo canshuur dhimis–si ay uga hortagto inaysan tira-yaridu carqladeyn kobaca dhaqaale ee dalka dhaca bariga fog ee Aasiya.
Dadyowga Japan ayaa hoos isu-dhimayey 4-tii sano ee ugu danbeysay kadib sanado badan oo digniino ah oo ku aadan hoos-u-dhaca ku socda heerka dhalasho ee dadka Japan oo aad u hooseysa. Tani ayaa soo dadejisay in dhaqaal-yahannada dalkaas ay ku cadaadiyaan Ra’isul wasaare Shinzo Abe inuu qaato go’aan uu golaha barlamaanka ku horgeynayo hindise ku aadan kordhinta tirada heerka dhalasho ee caruurta Japan.
Tirada dadka shaqeeya ee reer Japan ayaa hoos u sii dhaceysay sanad kasta taniyo 1990 sida laga soo xigtay Wazaaradda Arrimaha Gudaha ee Japan. Xogtan ayaa sidoo kale muujisay in tirada dadka shaqeyn doona 2060-ka ay noqon doonaan wax ka yar 44-malyuun.
Qore: Zakariya Xasan
Next: Haweeneyd dhashay cunug u eg Rah